Oscar Mingueza Oo Helay Boos Joogto Ah Kadib Dhaawicii Soo Gaaray Gerard Piqué
HomeHoryaalka SpainOscar Mingueza oo helay boos joogto ah kadib dhaawicii soo gaaray Gerard Piqué
November 23, 2020 Horyaalka Spain, Wararka Ciyaaraha 0
Tababaraha kooxda Barcelona Ronald Koeman ayaa dalacsiin kara daafaca kooxda B Oscar Mingueza si uu u bedelo Gerard Pique oo dhaawac ah isbuucyada soo socda.
Pique iyo Sergi Roberto ayaa labadoodaba la filayaa inay garoomada ka maqnaadaan ilaa ugu yaraan bilowga sanadka 2021, ka dib markii ay dhaawacyo jilibka ah ka soo gaareen kulankii La Blaugrana ee 2-0 kaga badisay Atletico Madrid ee La Liga .
Barcelona ayaa wajaheysa kulamo aad u mashquul badan ka hor dhamaadka 2020, iyadoo Koeman uusan awoodin inuu lasoo saxiixdo ciyaartoy cusub ilaa iyo inta uu furmayo suuqa kala iibsiga bisha Janaayo, waa inuu horumar ka sameeyaa gudaha.
Sii wadida walaaca jir ahaaneed ee Samuel Umtiti iyo Ronald Araujo ayaa la micno ah in Koeman uu u weecan karo 21 jir Mingueza kulanka bartamaha asbuuca ee ay la ciyaarayaan Dynamo Kyiv, sida ay sheegayaan wararka ka imanaya Mundo Deportivo .
Ikhtiyaarka kale ee Koeman ayaa ah inuu u yeero daafaca dhexe ee kooxda Mingueza ee Santi Ramos inuu noqdo xul xul oo macquul ah.
Ciyaaryahanka khadka dhexe Frenkie De Jong ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu buuxiyo Clement Lenglet, madaama Barcelona ay wajaheyso 10 kulan ka hor dhamaadka sanadka.